News Missile » आधुनिक कृषिप्रणाली आजको मुलभूत आवश्यकता :नयाँ शक्ति नेपालका नेता मदन राई
Monday, November 21st, 2016 at 10:39 pm By:News Missile Agriculture, Politics 10946 Views
बेलायतस्थित मैडस्टोनमा नेपालका कृषि विशेषज्ञ, समाजसेवी, तथा नयाँ शक्ति पार्टीका केद्रिय नेता मदन राई र बेलायतका बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुवीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
करिव बेलुकाको ७ वजेबाट आरम्भ भएको उक्त कार्यक्रममा खोटाङ्ग सेवा समाज यु के, किरात राई यायोक्खा प्रारम्भिक कमिटी मैडस्टोन, बिश्व नेपाली साहित्य महासंघ साउथ युके, केन्ट कलम ग्रुप यु के, रतन्छाली सेवा समाज युके र चाम्लिङ्ग खाम्वातिम यु के, लगायत बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कृषि विशेषज्ञ राईलाई नेपालका हाल कृषि व्यवसायको अवस्था, कृषिले देश विकाशमा खेलेको भूमिका र नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नुका कारण लगाएत पार्टीका भावियोजना सम्वन्धि थुप्रै प्रश्नहरु सोधिएको थियो ।
खोटाङ्गका कृषि विशेषज्ञ तथा नेता मदन राईले भने,‘नेपाल मात्र नभएर संसारकै दिगो समृद्धिका लागि कृषि र शिक्षा चाहिन्छ । कृषिबिना विकाश सम्भव नै हुँदैन । विकासका आधार नै कृषि हो । किनभने देश विकासका लागि उधोगधन्दाका लागि चाहिने कच्चा पर्दाथदेखि सबै सामग्रीहरु कृषिबाट नै पूर्ति हुन्छ । कृषिबिनाको मानवजीवन कल्पना नै नगरे हुन्छ । गाँस, बास कपास लगायत सबै चिजहरु कृषिमा नै निर्भर हृुन्छ ।
संसारमै जलस्रोतको धनी देश नेपाल, संसारका सबै हावा पानी भएको देश नेपाल, संसारका सबै किसिमका अन्न बाली उब्जाउ हुने देश नेपाल हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि सरकारमा रहेका नेतृत्वहरुमा तत्व ज्ञान, शिक्षा र चेतनाको कमीको कारण देशको विकाश ठप्प भएको छ । दश करोड जनतालाई पुग्ने पानी नेपालमा छ। कृषि योग्य जमिनहरु सबै बाँझो हुन लागे । देशका कर्णधार युवाहरु वेरोजगारीका लागि सबै बाहिरन लागे । अव भने सबैले गहिरिएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । परम्परावादी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिकिरण कृषिप्रणालीको विकासमा जोड दिनु आवश्यकता छ । खेर गैहेको मल, माटो र पानीलाई सदुपयोग गरी आधुनिक कृषिप्रणालीको विकास गरी अर्गानिक अनाज उत्पादन गरी अत्यधिक पर्यटकहरु देशमा भित्र्याउन सकिन्छ । नेपाल प्रकृतिले बरदान दिएको देश हो । ’
धेरै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहेका मदन राईले नयाँ शक्ति पार्टी र नेपालको राजनीतिको बारेमा यसरी बताए । ‘हामी जो कोही पनि, राजनीतिबाट पृथक बन्न सकिन्न। देश विकासका लागि त झनै राजनीतिमा सहभागी हुनै पर्छ । समय परिवर्तनशील छ । हिजोको २५० बर्ष पुरानो राजनीतिका संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । वर्तमान नेतृत्वबाट देशको बिकास हुनै सक्दैन । निस्वार्थ, बिचार, समय, तत्व ज्ञान र शिक्षाको चेतना भएको सक्षम ब्यक्तिले मात्र समय अनुसार देशको बिकाश गर्नसक्छ । कम्तिमा आफू, समाज र देशलाई सोच्न सक्ने ब्यक्तिले मात्र समाज र देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । आजका सबै नेताहरु खाली आफुलाईमात्र सोच्छन् भने त्यस्तो नेताले जनतालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन ।
मञ्चमा उभिएर खादा लगाएर छाती फुलाएर जनताभन्दा माथि आफूलाई सोच्ने नेतृत्वबाट जनता र देशको भलो हुने काम हुनै सक्दैन । संधै आफूभन्दा जनता ठूलो मान्नुपर्छ । किनकि जनताले नै देश र जनताका लागि नेता चुनेका हुन् । जनता र देश बनाउने देशभक्तले त ग्राउण्डमा आएर जनतासंगै आफूलाई राख्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको मुलुकमा जनताभन्दा माथि नेता हुनै सक्दैन । नेता जनताका सेवक हो शासक होइन। राजनीतिमा आफूलाई होइन समाजलाई बनाउनु पर्छ । सबै क्षेत्रबाट सबै बिषयका पोख्त बिशेषज्ञहरु राष्ट निर्माणमा सहभागिता गराउनुुपर्छ। किन भने उसलाई जति ज्ञान अरुलाई हुन्न । बिज्ञ ब्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याइनु पर्छ । अनि मात्र देशको बिकास हुन्छ ।
म देशको समृद्धिको लागि राजनीतिमा बसेको हो । कुनै पदको लोभमा होइन । १५ पतिशत नेपाली युवाहरु बिदेसका उच्च पदमा बसेर विदेसको बिकास गरिरहेका छन् । अव ती युवा जनशक्तिको क्षमतालाई हाम्रो देश विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । टेक्नोपोलिटिशीयन प्रणाली अपनाउनु पर्छ । अवका देश निर्माताहरुले सम्मान, खादा र भाषण कम र काम बढी गरेर देखाउनु पर्छ । वर्तमानका जनताले सबै सुविधा युक्त शहरमा बस्न रुचाउछन् । त्यसैले हामीले अव गाउँलाई नै शहर बनाउनु पर्छ । देशबाट जनताहरु बिस्थापित हुनबाट रोक्नुपर्छ। वर्तमान समयको लागि पूर्व प्रधान मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देशका र जनताका लागि योग्य ब्यक्ति हुन् । उनी संसारलाई बझ्ुन सक्ने विज्ञ ब्यक्ति हुन् । उनले जनताको चाहना र समयलाई बुझेर समावेशी राजनीतिक, प्रगतिशील र गतिशील लोकतंन्त्रलाई मान्यता दिएर अघि बढेको छ । र अहिलेको जनताको चाहना पनि यही हुन्। यही कुराहरुमा प्रभावित भएर नै मैले उनलाई पनि साथ दिएको हो ।
१४ बर्षको उमेरमा ढाकर बोकेर पहाडबाट काठमाडौ झरेका मदन राईले जीवनमा धेरै संघर्ष गरेर भारत, अमेरिका, बेलायत र युरोपबाट धेरै डिग्रीको सर्टिफिकेटहरु प्राप्त गरेर संसारका बिभिन्न मुलुकहरुमा कृषि विशेषज्ञका रुपमा उच्च पदमा बसेर काम गरिसकेका छन् । उनले संसारका धेरै अनुभव प्राप्त गरेको कुरा अवगत गराए । राईले भने, नेपालमा पढाइने पुरानो शिक्षा प्रणाली एकदम काम लाग्दैन । घोकन्ते बिद्याले केही प्रगती र विकास गर्न सक्दैन । राईले, आफूसंग संसारका धेरै देशहरुका डिग्रीका सर्टिफिकेटहरु भएपनि खासै काम नगरेको र पढेको पनि सबै बिर्सिसकेको छु भने। कृषि बिशेषज्ञ राईले भने, यो जमानामा पनि ठूल ठूला पर्खालभित्र घोकाइने शिक्षाको कामै छैन। जुन बिषयमा पढाइने हो विद्यार्थीलाई त्यही विषयमा अध्ययन कम र अत्याधिक प्राक्टिकल गराउनुपर्छ । अनिमात्र बिद्यार्थी परिपक्क बन्छ र कहिले बिर्सदैन । यो विधिलाई प्रयोग गरेर आफू सफल भएको राईले दावी गरे ।
अहिले पनि विभिन्न जिल्लाका विभिन्न जातीका १५० भन्दा बढी ६ या ८ बर्षदेखि माथिका विद्यार्थीहरु खोटाङ्ग जिल्लामा आफ्नै विद्यालय सुभम फाउण्डेशनमा आफूले नै सबै जिम्मा लिएर अध्ययन गराउदै आएका छन् । धेरैले अध्ययन सकिसके । एस.एल.सी.मा डिस्टिंशन र धेरैले प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण गर्न सफल भए । फेल त एउटा पनि भएन । बिधार्थीलाई आत्म निर्भर हुने शिक्षा दिन्छु र उनीहरुलाई अध्ययनका लागि आवश्यक साधनहरु सबै प्रसस्त व्यवस्था गरेको छु । खाने कुरा, लाउने कपडा देखि चाहिने सामग्रीहरु सबै बिद्यार्थीले नै उत्पादन गर्ने गर्छन् ।
विद्यार्थीलाई आत्म निर्भर शिक्षा प्रणाली लागू गरी सक्षम बनाउनका लागि विद्यालय खोल्न धेरै प्रयास गर्दा पनि सरकारले अनुमति नदिएको हुनाले संचालन गर्दै गरेको अरुको विद्यालय किनेर संचालन गर्नु परेको गुनाशो विषेशज्ञ राईले ब्यक्त गरे । लामो प्रयाश पश्चात अहिले भने बल्ल उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यालय संचालन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको खुशी पनि राईले सबै सामु बाड्न भ्याए । राईले भने, अव केही बर्षभित्रमा देशभरी नै उक्त शिक्षा प्रणालीको बिस्तार गर्ने योजना रहेको तर यसका लागि सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ । नेता राईका यी सबै कुराहरु सुनेर उपस्थित सबैसदस्यहरु खुशीले गद् गद् भइरहेका थिए । केही महानुभावले भनिरहेका थिए, राईका यो नयाँ शिक्षा प्रणालीको अभियानको कुरो सुन्दा त गजव लाग्यो । केहीले भनिरहेका थिए, साच्चै एउटा मीठो सपना झंै लाग्ने मदन राईका त्यो विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई भविष्यमा हेर्न जानै पर्छ । हो नेपालीहरुले वाध्यतावश परदेशको भूगोललाई कर्मथलो रोजेतापनि आखिरी यो मन त नेपाली नै हो । नेपालको समृद्धिमा कस्को पो मन रमाउदैन होला र ? यसरी त्यो दिन सबैले कृषि विषेशज्ञ मदन राईलाई स्यावाशी, वधाई र शुभकामनाको बर्षासँगै स्वागत गरे ।
खोटाङ्ग जिल्लाको जनताका सेवाका लागि, खोटाङ्ग सेवा समाज युकेको एम्वुलेन्स प्रोजेक्टलाई खोटाङ्ग जिल्ला भरि व्यवस्थापन गर्न खोटाङ्गका लागि संयोजक, समाज सेवी कृषिविद् मदन राईलाई कार्यक्रमको अन्तमा सोही संस्थाका अध्यक्ष असोक राईले, बेलायत, अस्टेलिया, मलेशिया, जर्मन र अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका खोटाङ्गबासी दाताहरुले दःुख गरेर पाई पाई गरी जोगाएर आफ्नो जिल्लाबासी जनताका सेवाका लागि ७ वटा एम्वुलेन्सहरु तयार पार्दैछन् । सबै जिल्लाबासीहरुले सबै दाताहरुको भावना र मर्मलाई बुझेर आफ्नो सम्झेर उक्त एम्वरलेन्सहरु जतनसाथ प्रयोग गर्छन भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ भन्ने सन्देश पठाएका छन् ।
खोटाङ्ग सेवा समाज यु केका बरिष्ठ सल्लाहकार रत्न राई र सोही संस्थाका महिला विभागकी अध्यक्ष भाग्यवती राईले उक्त कार्यक्रमको प्रायोजकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि सहयोगप्रति राई दम्पतीलाई सबैले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमबाट समापन भएको थियो ।
जानुका राई/ वेलायत
परिचयपत्र वितरण हुदै, बेलुकासम्ममा बुथ निर्माण भइसक्ने
मौन अवधि पर्सि मतदान नसकिएसम्म जारी रहने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि काठमाण्डौंबाट काँग्रेसका अमिन पाण्डे लगाएत दावेदारहरु को को छन्?